Renda dia fampiasa mahazatra amin'ny dantelina. Amin'ny ankapobeny dia hita amin'ny akanjo, atin'akanjo, lamba lamba ao an-trano. Manify sy sosona ny dantelina. Ny atin'akanjo fahavaratra dia matetika no asiana dantelina. Ny dantelina amin'ny akanjo dia afaka mamorona fahatsapana mamy. Ny dantelina amin'ny lamba an-trano dia manampy fahatsapana tsy ampoizina ao an-trano. Ny lamba an-trano misy dantelina dia asiana, izay manampy fahatsapana ambaratonga amin'ny lamba an-trano. Ka ahoana no hanavahantsika ny kalitao rehefa mividy vokatra vita amin'ny dantelina?
Fisehoana voalohany. Akanjo landy tsara kalitao, miaraka amina tsipika mazava, pirinty feno ary lamba tsara, tsy misy tsipika manjavozavo sy fanonta matevina. Manoro hevitra ny mpanjifa mba hisafidy vokatra misy loko maivana na volon-koditra voajanahary, satria tsy mora manjavona. Ary ny vokatra sasany misy loko matanjaka dia mety halazo mora foana noho ny fandokoana mavesatra. Ho fanampin'izay, misy fitsapana tsotra: apetraho amin'ny sombin-damba fotsy ny vokatra ary ahosory mandroso sy miverina. Raha mahita famantarana ny tasy amin'ny lamba fotsy ianao, dia ho faty.
Ny faharoa dia maimbo. Ny fofon'ny vokatra tsara kalitao amin'ny ankapobeny dia vaovao sy voajanahary nefa tsy misy fofona hafahafa. Raha manokatra ny fonosana ianao ary mamofona fofona manitra toy ny fofona marikivy, dia angamba satria ny formaldehyde na ny asidra ao amin'ilay vokatra dia mihoatra ny fenitra, noho izany dia tsara kokoa ny tsy mividy azy. Amin'izao fotoana izao, ny fenitra tsy maintsy atao amin'ny sanda pH ny lamba dia amin'ny ankapobeny 4.0-7.5. Tendreo farany ilay firafitra.
Ny farany dia ny fikosehana ny tanana. Ny vokatra tsara dia mahatsapa mahazo aina sy marefo, miaraka amin'ny tery, ary tsy mahatsiaro ho marokoroko na mora tohina. Rehefa manandrana vokatra vita amin'ny landihazo madio dia misy filamenta vitsivitsy azo sintomina handrehitra, ary mahazatra azy ireo ny mamoaka fofona taratasy mirehitra rehefa may. Azonao atao ihany koa ny manolana ny lavenona amin'ny tananao. Raha tsy misy vongan-kazo dia midika izany fa vokatra landihazo madio izy io. Raha misy vongan, dia midika izany fa misy fibre simika izy io.